Ku xigeenka Ergayga Midowga Afirka Wafula Wamunyinyi oo shirjaraa,id ku qabtay Muqdisho
Muqdisho:-Ku xigeenka Ergayga Midowga Afirka ee Arrimaha Somalia Wafula Wamunyinyi ayaa maanta shirjaraa,id ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in ciidamada AMISOM la geyndoono magaalooyinka Baydhabo ee xarunta gobalka Bay iyo magaalada B/weyne.
Wafula Wamunyinyi ayaa saxaafada sidoo kale u sheegay in saldhigayada magaalada Muqdisho la geyn doono ciidamo boolis ah oo ka tirsan ciidanka AMISOM .Ku xigeenka Ergayga Midowga Afirka ee Arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa uu warbaahinta kula hadlay xarunta Xalane oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada AMISOM
Wafula Wamunyinyi ayaa waxaa uu ugu baaqay madaxada DFKM in ay la shaqeeyaan ciidamada AMISOM ayna carqaladeyn si looga gudbo ayuu yiri xaalada adeg oo ay ku jirto Soomaaliya.
Wafula Wamunyinyi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay soo gaari doonaan ciidamo boolis ah oo ka kala socda wadamada Uganda iyo Nigeria waxaana goobta ku sugnaa taliyaha cusub ee ciidamada AMISOM Jen Andrew Gutti wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu xilka maanta la wareego.
Taliyihii hore ee AMISOM Jen. Fred Mugisha oo ah taliyaha hore ee AMISOM ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan howlgalada ciidamada AMISOM wuxuuna sheegay in ay dhamaadeen howlgaldii AMISOM wajigeedii koowaad lana gali doono wajiga labaad wuxuuna ku faanay in ay u gudbi doonaan gobalada dalka.